ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အမျိုးသားတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင် ရှားပါးကျားဖြူလေး မွေးဖွား - Xinhua News Agency
ဒါကာ၊ ဇွန် ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဒါကာတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် ဟု လူသိများသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အမျိုးသားတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ရှိ ကျားခြံဝင်းအတွင်း ဘင်္ဂလားကျားပေါက်လေးနှစ်ကောင်အား အခြားကျားတစ်ကောင်နှင့်အတူ ဆော့ကစားနေသည်ကို ဇွန် ၁၃ ရက်က မြင်တွေ့ရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့ရှိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အမျိုးသားတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင် ဘင်္ဂလားကျားပေါက်လေးများ ဆော့ကစားနေသည်ကို ဇွန် ၁၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့ရှိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အမျိုးသားတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင် ဆော့ကစားနေသော ရွိုင်ရယ် ဘင်္ဂလားကျားပေါက်လေးများကို ၎င်းတို့၏မိခင်နှင့်အတူ ဇွန် ၁၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့ရှိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အမျိုးသားတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင် အဖြူရောင် ရွိုင်ရယ် ဘင်္ဂလားကျားပေါက်လေးတစ်ကောင်အား ဇွန် ၁၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အသက် နှစ်လအရွယ်ရှိပြီဖြစ်သော ကျားပေါက်လေးနှစ်ကောင်အနက် တစ်ကောင်မှာ ပင်ကိုအမွေးအမျှင်အရောင်များမှေးမှိန်နေခြင်းကြောင့် ရှားပါးလှသော အဖြူရောင်ကျားပေါက်လေး တစ်ကောင်အသွင် ဖြစ်နေသည်။ (Xinhua)
Asia Album: Rare white tiger born at Bangladesh National Zoo
Source: XinhuaEditor: huaxia2022-06-14 10:02:15
DHAKA, June 14 (Xinhua) — Two Bengal tiger cubs are seen on Monday playing with each other in the tiger enclosure at the Bangladesh National Zoo, also known as the Dhaka Zoo.
One of the two-month-old cubs isarare white cub, whose pale coloration is due to the lack of the pheomelanin pigments.
Photo 1 : Royal Bengal Tiger cubs play inside their enclosure in Bangladesh National Zoo in Dhaka on June 13, 2022. (Xinhua)
Photo2: Tiger cubs play together inside their enclosure in Bangladesh National Zoo in Dhaka on June 13, 2022. (Xinhua)
Photo3: Royal Bengal Tiger cubs are seen with their mother in Bangladesh National Zoo in Dhaka on June 13, 2022. (Xinhua)
Photo4: A white Royal Bengal Tiger cub is seen in Bangladesh National Zoo in Dhaka on June 13, 2022. (Xinhua)
Photo5: A white Royal Bengal Tiger cub is seen in Bangladesh National Zoo in Dhaka on June 13, 2022. (Xinhua)
Photo6: A white Royal Bengal Tiger cub is seen in Bangladesh National Zoo in Dhaka on June 13, 2022. (Xinhua)
ရှီကျင့်ဖိန်၏ ကျေးလက်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို လေ့လာသင်ယူကြရန် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် အလေးထား ပြောကြား